Hoggaamiyaha Mucaaradka Tanzania oo eedeyn ku shubasho u jeediyay Madaxweyne John Magufuli. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Hoggaamiyaha Mucaaradka Tanzania oo eedeyn ku shubasho u jeediyay Madaxweyne John Magufuli.
Hoggaamiyaha Mucaaradka Tanzania oo eedeyn ku shubasho u jeediyay Madaxweyne John Magufuli.
Musharax Madaxtinimada mucaaradka ugu weyn dalka Tanzania, Tundu Lissu, ayaa ka soo hor muuqday Guddiga anshaxa ee gudiga doorashooyinka talaadan maanta ah isagoo wax laga weydiinayo eedeyn uu u jeediyay Madaxweynaha dalka John Magufuli taas oo aheyd in uu sheegay in Madaxweynaha uu la kulmay agaasimaha degmooyinka ee guddiga doorashada isla markana ka wadahadleen sidii Madaxweynaha ugu shuban lahaa doorashada bisha October qorsheysan.
Sarkaal sare oo ka tirsan Guddiga doorashooyinka Wilsan Mahere ayaa sheegay in eedeynta ay ka dhigan tahay in doorashada dalka ka dhacaysa aysan aheyd mid ku qabsoomaysa jawi xor iyo xalaal ah.
Xafiiska diiwaan gelinta xisbiyada siyaasadda ayaa warqad u direy xisbiga Mr. Lissu ee Chadema in hadalka uu soo dhigay baraha bulshada uu yahay mid khatar gelinaya amniga qaranka.
Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Tanzania ayaa sheegay in booliiska carqaladeeyeen kolonyo xisboga oo mareysay degaanka Nyamongo ee waqooyi dalka xilli ay ku socdaan goob ay ka ololeynayaan.Waxaa uu sheegay in taageeriyaashii six un loola dhaqmay la garaacay isla markaana ka dhibaateeyay qaarkood. Mr Lissu ayaa bartiisa Twitter soo geliyay muuqaal sheegaya isku dhaca u dhexeeya booliiska iyo shacabka.
Previous articleXuska 29-ka September ee ka hortagga khasaaraha ama dayaca ku yimaada cuntada.
Next articleWasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle oo la kulmay safiirka UK+SAWIRRO.